ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ကော်မီတီ ဥက္ကဌ ဦးဖိုးလှနန့် အင်တာဗျူး
ဒီဇင်ဘာ ၂၈။ ။လွန်ခရေ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နိန့်က ဘဂ်လာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ
ကောဆ်ဘာဇာ ခေါ် ဖလောင်းချိတ် မြို့ မှာ ရခိုင်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်
မျိုးချစ်များ စုပေါင်းဗြီးကေ ” Arakan Freedom Movement
Committee – AFMC ''ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု
ကော်မီတီ”တရပ်ကို အောက်ဖေါ်ပြဘာ လူတိနန်
အလုပ်အမှုဆောင်တာဝန်ရွီးချယ်ရန်တက်ရောက်လာသူများအထဲမှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသောအများဆန္ဒမဲဖြင့်အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းရွီးချယ်ခဂတ်ပါသည်။
(၅) ဦး ကျော်ခိုင်
(၆) ဦး မောင်အေးချမ်း
(၇) ဦး ခိုင်ပန်းအောင်
(၈) ဦး ခိုင်ကျော်ခိုင် ရို့ ဖြစ်ကတ်ဘာရေ။
ဒေပိုင် ဖွဲ့ စီးထားရေ ကော်မီတီက ထိပ်တန်းတာဝန်ခံ ဥက္ကဌ ဦးဖိုးလှ ကို
လေးဝတီသတင်းဌါန ဘဂ်လာေးခ်ျ့ တာဝန်ခံ ခိုင်ဥက္ကာပျံ(ရခိုင်ရိုးမ) က
ခိုင်ဥက္ကာပျံ။ ။ မဂ်လာဘာ ရှိခိုးဘာယင့် ဆရာ
ဥက္ကဌ ဦးဖိုးလှ။ ။ မဂ်လာဘာ
မိန်း။ ။လူကြီးမင်းရို့ အနိန်နန့် ဇာကြောင့်ဒေပိုင် ကိုလိုနီစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ရစော်ဘာလေး။
ဖြေ။ ။ရခိုင်လူမျိုးဆိုစွာ နှစ်ပေါင်း ၅ ထောင်ကျော် မာရယု မင်းမှသည် မဟာသမတရာဇာ မင်းအထိ ဘုရင်မင်းမြတ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ဖြင့် ဓည၀တီ၊ ဝေသာလီ၊ လေးမြို့၊ မြောက်ဦး ခေတ်ကြီး ၄ ခေတ်နန့်ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ ထယ်ဝါကြီးကျယ်ခရေ တိုင်းပြည်တစ်ပြည် လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါရေ။ ဒေကြီးကျယ်ခရေ ရခိုင့် ဘုရင့် နိုင်ငံတော်ရေ မကြေငြါသောနယ်ချဲ့ ဗမာ ဘုရင်မောင်ဝိုင်း၏ ကျူးကျော် စစ်ကြောင့် ၁၇၈၄ ခု ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နိန့်မာ ထီးကျိုးစည်ပေါက် ဖြစ်ပြီးကေ ဗမာ ကျူးကျော်သူ နယ်ချဲ့ လက်အောက်ကို ကျရောက်ခရပါရေ။
ရခိုင့် ကိုလိုနီ ကျွန်ဘ၀ကို အကျဉ်းရုံး ဖော်ပြရပါကေ-
(၁) ပထမ ဗမာနယ်ချဲ့ပါးမာ ၁၇၈၄ က ၁၈၂၆ ထိ -----------၄၂နှစ်
(၂) ဒုတိယ အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့ ပါးမာ ၁၈၂၆ က ၁၉၄၂ ထိ ………-၁၁၆ နှစ်
(၃) တတိယ ဖက်ဆစ် ဂျပန်ပါးမာ ၁၉၄၂ က ၁၉၄၅ ထိ …-------….၃ နှစ်
(၄) စတုတ္ထ အင်္ဂလိပ် ဘားမာ တဖန် ၁၉၄၅ က ၁၉၄၈ ထိ ……----.၃ နှစ်
(၅) ပဉ္စမ ဗမာ နယ်ချဲ့ဘားမာ တဖန် ၁၉၄၈ က ၂၀၁၁ ဒေနိန့်ထိ ၆၃ နှစ်
ဗမာ နယ်ချဲ့ဘားမာ အယင်က .။------------၄၂နှစ်
နှောက် ဒေနိန့်ထိ---------------------------- ၆၃ နှစ် အားလုံးပေါင်း
နယ်ချဲ့ဟူသမျသည် သူရို့၏ အကျင့်စရိုက်နှင့် အညီ -
(က) နိုင်ငံရေးအရ ----------------------------------နယ်ချဲ့ခြင်း (ခ) စီးပွာရေး အရ ---------------------------------လက်ဝါးကြီးအုတ် ဂုတ်သွီးစုတ်ခြင်း
(ဂ) ယိုင်ကျေးမှုအရ --------------------------------မြီလှန်ဖျက်ဆီးခြင်း
( ဃ) လူမျိုးရေးအရ
-------------------------------သွီးနှောဝါးမျိုခြင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်၏ မြီတွင်းမြီပေါ်၊ရီအောက်၊ တန်ဖိုးမဖြတ်နှိုင်ရေ သဘ၀ ဓာတ်ငွေ့အပါအ၀င် နှောက်ဆုံး လူခွန်ကိုပါ ကောက်ယူဂုတ်သွီးစုတ်နိန်ကတ်ခြင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူရို့၏ ဘ၀ကား ဆင်းရေးတွင်းနက်သထက်နက်ပြီးကေ ကိုလိုနီ နယ်ချဲရို့ ၏ ဆိုကျိုးဟူသမျှကို ခါးစည်းခံနိန်ကတ်ရစွာပါ ။ ယင်းကြောင့် ကိုလိုနီကျွန်ဘ၀က လွတ်မြောက်ဖို့ အကြမ်းမဖက်တေ တိုက်ပွဲသဏ္ဍာန်ကို ဖော်ထုပ်ရစွာ ဖြစ်ပါရေ။
မိန်း။ ။ ဒေပိုင်ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်စော်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပ-ရခိုင်လူမျိုးတိက လက်ခံကတ်ဖို့ထင်ဘာယင့်လား
ဖြေ။ ကျူးကျော်သူနယ်ချဲ့ရို့အဓမ္မသိမ်းပိုက်ထားရေမိမိရို့အဖိုးအဖီးပိုင်ရေ မြီကို ပြန်လည်ရယူဖို့။ဆုံးရှုံးနိန်ရေ အချပ်အချာအာဏာ ၃ ရပ် (ဥပဒေ ပြုစုခွင့်၊ တရားစီရင်ခွင့်၊ အုပ်ချုပ်ခွင့်)ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ ကြိုးစားရေ ရုန်းကန်မှုကို ရခိုင်သားအများစုက ခိုင်မာစွာ ထောက်ခံရေလို့ ယုံကြည်ပါရေ။ အကြောင်းက ၁၉၉၀ ကမ္ဘာသိ ရွီးကောက်ပွဲမာ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့Arakan League For Democracy –ALD ရခိုင်ပြည်မာ အနိုင်ရစွာ၊ ၂၀၁၀ ရွီးကောက်ပွဲမာ ရခိုင့်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ Rakhine Nationalities Development Party- RNDP အနိုင်ရစွာရေ ရခိုင်သားတိ သူရို့ဖော်ပြနိုင်ရေ ဘောင်အထဲက ရခိုင်ပြည် လွတ်လတ်ရေး တောင်းစွာလို့ ကျနော်ရို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ နားလည်ထားပါရေ။
မိန်း။ ။ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ လုပ်ဖို့စော်ကို ဇါပိုင်မြင်ဘာရေလေး-
အဖြေ၊။ ။အတိုချုပ်ပြောရကေ ပင်လုံညီလာခံဆိုစွာ ဗမာတိက ဗမာပြည်ဆိုရေ တိုင်းပြည်လွတ်လတ်ရေး ရဖို့အတွက် ဗမာမဟုတ်တေ အခြားလူမျိုး( ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊ ရခိုင်) တိကိုလှဲ့ စားစည်းရုံးခရေ၊အသုံးချခရေ နည်းဗျူဟာ တရပ်ရာ ဖြစ်တေ၊ လက်တွိ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ပါ မည်သည့်အချိန်အခါကလဲ အကောင်အထည်မဖော်ခ နောင်ကိုလဲ ဖော်လီဖို့မဟုတ်ပါ။ ယင်းကြောင့်ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံဆိုစွာလည်း ဒေပုတ်ထဲက ဒေပဲလို့ရာ မြင်ပါရေ။
မိန်း။ ။ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တိက လွတ်လွပ်ရီးအတွက် အမှန်လုပ်ဖို့လိုကတ်ပါယင့်လား
ဖြေ။ ။၁၇၈၄ ဗမာနယ်ချဲ့ဘားမာ ကျရောက်တေလောက်ကပင် ဒေနိန့်ထိ တဗိုလ်ကျတဗိုလ်တက်စနစ်နန့် ရခိုင်ပြည်ကို ပြန်လည်ထူထောင်နှိုင်ဖို့ကြိုးစားကတ်တေရခိုင့်သူရဲကောင်းတိ၏ဘ၀အသက်တိကားမရွီမ တွက် နှိုင်အောင်ပီးဆပ်လီကတ်ပါဗျာလ်၊ သို့သော် ဒေနိန့်ထိ မြင့်တခါနိမ့်တလှည့်နန့် ရခိုင့်သူရဲကောင်းရို့၏ ဓါးကို ဓါးချင်း လှံကို လှံချင်းတော်လှန်လာရေ တိုက်ပွဲရေ ၂၂၇ နှစ်ကြာလာသည့်တိုင်အောင် လုံးဝအဆက်မပြတ် သိမ့်ပါ၊ မလွတ်လပ်မချင်းလည်း တိုက်ပွဲကားအဆက်ပြတ်လီဖို့မဟုတ်ပါ။ ဒေအချက်ရေ လက်နက်ကိုင်မပါဘဲ ရခိုင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး မရနှိုင်ဆိုစွာကို ရခိုင်သားတိသက်သီပြနိန်ကတ်ခြင်းဖြစ်ပါရေ။ “အသက်ကိုလှီးသွီးချောင်းစီးမှ အပြီးကြံ့ ခိုင်၊ နိုင်ငံတိုင်းမြို့ ၊အစုို့ စို့ ကို၊ ရလီဖူးခ၊ ဤလောကသည်၊ အောက်ကျမခံချင်သောကြောင့်” လို့ ဂေါင်းဆောင်ကြီးရို့ အခိုင်အမာ မိန့်ဆိုထားခရေမဟုတ်ပါလား။
မိန်း။ ။ အခုအချိန်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တိက ဗမာ(စစ်)အစိုးရနန့် ငြိမ်းချမ်းရီးဆွီးနွီးနီကေ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်(ပါတီ) အဖွဲ့ တိက ဆွီးနွီးဖို့လိုအပ်တေလို့ ယူဆဘာယင့်လား
ဖြေ။ ။တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တိ ဗမာစစ်အစိုးရဆိုစွာနန့်ငြီးချမ်းရေးဆွေးနွေးနိန်ကတ်တေ ဆိုစွာရေနည်းဗျူဟာအရအင်အားအနည်းအများပေါ်မူတည်လို့ နိုင်ငံရေးကဇတ်ဝိုင်းတ်ိရာဖြစ်ပါရေ ရခိုင့်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတိ ငြီးချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့ ကားသူရို့အလုပ်ပါ။ ကျနော်ရို့အလုပ်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျနော်ရို့အမြင်ကိုပြောရဖို့ဆိုကေ ရခိုင့်လက်နက်ကိုင်အင်အားတိ ယင်းပိုင်လုပ်လီဖို့မဟုတ် လို့မြင်ပါရေ။ မိန်း။ ။နာက်ဆုံး ရခိုင်ပြည်သူတိကို ဇာပြောရှင်ဘာရေလည်း
ဖြေ။ ။ဒေအခွင့်အရေးကိုပီးရေအတွက်ကောင်းကောင်းကျေးဇူးတင်ပါရေ နှောက်ဆုံးအနိန်နန့် ရခိုင်ပြည်သူတိကို ပြောချင်စွာက ရခုိုင်သားကျွန်ဖြစ်စွာ (၂၂၇) နှစ်ဖြစ်ပါဗျာလ် ကျွန်ဆိုစွာ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုကိုယ်မဖန်တီးနှိုင်ရေလူကိုပြောစွာပါ၊ ကျနော်ရို့ရခိုင်သားတိ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်အားလုံးကို နယ်ချဲ့ဗမာတိအဓမ္မသိမ်းယူထားစွာ (၁၀၅) နှစ်ဖြစ်လီပါ ဗျာလ် ဒေကျွန်ဘ၀ကလွတ်မြောက်ပြီးကေ ဖေါ်ပြခရေ အချုပ်အချာအာဏာ (၃) ရပ်ကို ပြန်လည်ရ ယူလို့ ကိုရို့ရခိုင်သားကံကြမ္မာကို ကိုယ်ရို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဖို့လက်နက်မကိုင်ရေဒေလှုပ်ရှားမှု...............
“ရခိုင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး ငရို့အရေး---- ငရို့အရေး ”
“ရခိုင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး ငရို့အရေး ---- ငရို့အရေး”
ဆိုရေ ကြွီးကြော်သံနန့် နိုင်ငံတကာအလိုက် တိုက်ပွဲဝင်လားကတ်ဖို့ကျနော်ရို့ “ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကော်မတီ” Arakan Freedom Movement Committee – AFMC တိက စိုင်းပြင်းနိန်ကတ်ပါရေ၊ ဒေတိုက်ပွဲမာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာရောက် ရခိုင်သားတိအနိန်နန့် ရောက်တေနိန်ရာက ကျရေတာဝန်ကို တပိုင်တနိုင်ပါဝင်ကတ်ပါလို့ အထူးလည်း စားစွာနန့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရေ။ ကျနော်ရို့၏ဥပဒေဘောင်အတွင်းက လက်နက်မကိုင်ရေ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲရေ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနန့်ဖွေးသာတခတ်မာ ဂေါင်းနန့် ပန်းပိုင် ခွဲခြားလို့မရပါ တသားတည်းရာ ဖြစ်ပါရေ။ ယင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့လူသားတိအလည်မာ ရခိုင်လူမျိုးရေလွတ်လပ်တေလူမျိုးတမျိုးအဖြစ်ဂုဏ် သရေရှိရှိပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကတ်ပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရေ။ ။ ခိုင်ဥက္ကာပျံ။ ။ဒေပိုင်မအားလပ်တေကြားထဲက ဖြေကြားပီးရေအတွက် ဆရာနန့်အတူ အားလုံးကို လေးဝတီဝိုင်းတော်သားတိကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရေ။ ယင်းကော်မီတီအဖွဲ့ ကို အမြဲတမ်းဘဂ်လားဒေခ်ျနိုင်ငံမှာ ဆက်လို့ တာဝန်တိထမ်းဆောင်လားကတ်ဖို့ဖြစ်ဗြီးကေ လာဖို့ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက်နိန်မှာ ဆန္ဒပြချီတက်ဖို့ လို့ လည်း သတင်းရရှိဘာရေ။
ခိုင်ဥက္ကာပျံ (ဘဂ်လာဒေခ်ျ့ )
အေပို့စ်ရေ လေးဝတီ က မီးမြန်အင်တာဗျူခြင်းသာဖြိုက်ပါရေ။ လေးဝတီ အာပေါ်လုံးဝမဟုတ်ပါ။
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 9:47 AM Links to this post
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 9:19 AM Links to this post
ကျောက်ဖြူမြို့ အစိုးရစီမံကိန်း အလုပ်သမားများ မကျေနပ်ကေလည်း ဂိတ်ပေါက်စောင့် ရဲတိ အလုပ်ဖြစ်နိန်
24 ဒီဇင်ဘာ 2011 ကျောက်ဖြူမြို့ အစိုးရစီမံကိန်း အလုပ်သမားများ မကျေနပ်ကေလည်း ဂိတ်ပေါက်စောင့် ရဲတိ အလုပ်ဖြစ်နီ ကျောက်ဖြူမြို့ နယ်များမှာ စစ်အစိုးရ က စီမံကိန်းများတည်ဆောက်ပြုလုပ်နိန်ရာ ဂိတ်ပေါက်စောင့်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု လုပ်နိန်ရေ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲဝင်များလစာမှာ မြန်မာငွေ တစ်သိန်းကျပ်စီ ရရှိနိန်ကြောင်း သတင်းရရှိဘာရေ။ အယင်က စစ်တပ်မှ ဂိတ်ပေါက်စောင့်တာဝန်းများ လုပ်ခကေလည်း စစ်တပ်က ရဲဖေါ်တိမှာ ရှိတန်းထွက်ချိန် ယင်းတာဝန်များကို ရဲလက်သို့လွဲအပ်ပီးခရေအတွက် ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ ငွေရပေါက်တိုးနိန်ကြောင်း တခြားရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များလည်း ဂိတ်ပေါက်စောင့်နိန်ရာကိုရဖို့ အတွက် ဆိုင်ရာ ရဲအရာရှိကြီးတိဘားမှာ လာဒ်ထိုးနိန်ကြောင်း မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါဆိုရေပိုင် ဂိတ်ပေါက်မစောင့် ရဖြစ်နိန်ရေ ရဲအသိုင်းအဝန်းက တဆင့် သိရဘာရေ။
ဒေဖက်က ရဲအမှုထမ်းတိ အဆင်ပြေနိန်ရေပိုင် အလုပ်သမားတိမှာ စီမံကိန်းအတွင်း ၀င်ရန် စစ်ဆေးမှုများ ထူထပ်လာကြောင်း အမည်မဖေါ်လိုရေ ဝန်ထမ်းတဦးက''အဝင်ဘာ အထွက်ဘာ တခုမကျံ စစ်ဆီး မိန်းမြန်း တခုမကျံ ဟိုလှန်ဒေရှာ လုပ်ပါရေ''လို့ လေးဝတီကိုပြောဘာရေ။ပိုဆိုးစွာက စီမံကိန်း ၀န်ထမ်းအသစ်တိမှာ ရက်ပြတ် စစ်ဆီးမှုခံနိန်ရကြောင်း လုပ်ကိုင်သူ တချို့  စိတ်ထိခိုက်မှုတိ ဖြစ်နိန်ကြောင်း သူက ဆက်လို့ ပြောဘာရေ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ လက်နက်ကိုင် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း မဆို မသင့်တော်လို့လုပ်ငန်းခွင်က အလုပ်သမားတိ တိုးတိုးပြောဆိုနိန်ကတ်ပါရေ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနိန်နန့် လုပ်ငန်းခွင် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ဦးစားပီး ဆောင်ရွက်မှုတိပြုလုပ်ဖို့ ထက် အရာရာမှာ ကိုယ်ရို့ အာဏာ တည်တန့် ခိုင်မြဲရေး နန့် ငွေရဖို့ အရီးလောက်ရာ ပြုလုပ်နိန်ကြောင်း အပင်ပန်းခံ လုပ်ငန်းခွင် အလုပ်သမားတိ အတွက် အကျိုးခံစားမှု သက်သာချောင်ချိရီး နန့် စိတ်ချမ်းသာမှု မရှိကြောင်း ယင်းအလုပ်သမားတိက မကျေမနပ်ဖြစ်နိန်ကတ်တေလို့ပြောနိန်ကြောင်း သတင်းရရှိဘာရေ။ ခိုင်ဥက္ကာပျံ (ရခိုင်ရိုးမ)လေးဝတီဝိုင်းတော်သား
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 8:25 PM Links to this post
ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကျဆုံးရေနိ ကုလသမဂ္ဂရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြပါဖို့
၂၂၇ နှစ်မြောက် ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကျဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှတ်နိကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂရုံးရှေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတရပ်ကို ဒီဇာဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ် လားဖို့ ဖြိုက်ပါရေလို့ သိဟိရပါရေ။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲကို အမေရိကန်ရောက် ရခိုင်လူမျိုးတိကပြုလုပ်ဖြိုက်ပြီးကေ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နိ မိုးသောက်ဖက် ၁၀း၀၀ ချက်တီက စတင်ပနာ ပြုလုပ်လားဖို့ ဖြိုက်ပါရေ။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲကို စီစိုင်ရေထဲက တာဝန်ခံ တယောက်ဖြိုက်တေ ကိုကျော်ဝင်းက“၁၇၈၄-ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၃၁-ရက်နိ ကျနော်ရို့ ရခိုင်နိုင်ငံတော် ကျဆုံးပြီးရေ လောက်ပင် ကိုယ့်သမိုင်း၊ ကိုယ့်စာပေ၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုတိကို လေ့လာ သင်ယူ ထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့်လည်း မဟိယာ၊ ရခိုင်လူမျိုးတိ မွေးရာပါ လူ့အခွင့်အရေးတိပါ ဆုံးရှုံးနီခရပါရေ။ အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခရေ
ဗမာအစိုးရတိကလည်း အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီစနစ်ထက် ဆိုးရွားပြီးကေ ရခိုင်ပြည်သူတိအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး အမျိုးမျိုးကို ကျူးလွန်နီပါရေ။ ရခိုင်သမိုင်းအမွေအနှစ်တိကို ဖျက်ဆီးရေ။ ရခိုင်လူမျိုးတိအပေါ် နိုင်ထက်စီးနင်းမှုတိကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်ရေ။ ယင်းပိုင်အပြုအမှုတိက ရခိုင်တမျိုးသားလုံး ပျောက်ကွယ်လားအောင် ပြုမှု ဆက်ဆံနီစော်ဖြိုက်ပါရေ။ ယင်းပိုင်ဖြိုက်လို့ ကျနော်ရို့ ရခိုင်လူမျိုးတိ ဆုံးရှုံးနီရေ ရပိုင်ခွင့်တိကို ကုလသမဂ္ဂရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ် တောင်းဆိုလားကတ်ဖို့ ဖြိုက်ပါရေ။” လို့ပြောပါရေ။ “တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ စုပေါင်းနီထိုင်ကတ်တေ နိုင်ငံတခုမှာ လူမျိုးကြီးဝါဒကို ကျင့်သုံးရေ လူမျိုးတမျိုးဟိနီကေ ယင်းပိုင်မဟုတ် ယင်းဝါဒကို အားပေးနီရေ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တရပ် ဟိနီကေ ယင်းနိုင်ငံရေ ဇာခါမှ စစ်မှန်ရေ ငြိမ်းချမ်းတရပ်ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟုတ်” လို့ စီစဉ်သူများထဲမှ တာဝန်ခံတဦးဖြိုက်တေ ကိုဘခင်က ပြောပြလားပါရေ။ ၁၉၆၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နိမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက ကိုလိုနီစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ယာဖြိုက်ကြောင်းကို ထုတ်ပြန်ခပါရေ။ ယေကေလည်းသို့ တစ်ချို့သော နိုင်ငံတိမှာ အဂုထက်တိုင် ဖုန်းကွယ်ခံ ကိုလိုနီကျွန် စနစ်အောက်မှာ ကျန်ရှိနီကြောင့် ကိုခိုင်ဘခင်က ဆက်လို့ပြောပြပါရေ။
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 7:03 PM Links to this post
ဦးနုနီရာကို လက်ဟိရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ရခိုင်သားတယောက်ဖြိုက်တေ ကိုနေတိုးက သရုပ်ဆောင်ဖို့လတ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးဖို့ ရုပ်ရှင်ကားမှာ ဦးနုအခန်းကဏ္ဍမှာ နေတိုးကို သရုပ်ဆောင်ခိုင်းဖို့လို့ သိရပါရေ။ ဦးနုရေ သူသမ္မတလက်ထက်က ရခိုင်ပြည်နယ်တိကို စည်းရုံးရေးဆင်းလာခပြီးကေ ရခိုင်ပြည်မှာ သောင်းကျန်နီခရေ မူဂျာဟစ်ကုလားတိကို မြန်မာပြည်သားအဖြိုက်သတ်မှတ်ပီးခရေ ပထမဦးဆုံး သမိုင်းတရားခံဖြိုက်ပါရေ။ အေဇာတ်ကားမှာ ယင်းအခန်းကဏ္ဍတိမှာ ရခိုင်သားတယောက်ဖြိုက်တေ ကိုနေတိုးက ဇာပုံစံသရုပ်ဆောင်လားဖို့လည်း ဆိုစော်ကို နေတိုးကို ချိုက်ကတ်တေ ရခိုင် ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိတ်သတ်တိ သောလော သောလောဖြိုက်နီကတ်ပါရေလို့ သတင်းရဟိပါရေ။
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 11:57 PM Links to this post
၂၂၇ နှစ်မြောက် ရခိုင်နိုင်ငံ ကျဆုံးရေနိန့် အတွက် ကြိုတင်
ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ နာမည်ကြီးခရေ ကျွှန်တော်ရို့ရခိုင်လူမျိုးတိရေ ကိုယ်ရို့ ယဉ်ကျေးမှု စာပီ အနုပညာ ဗိသုကာတိနန့် သီးခြားလွတ်လပ်တေ တိုင်းပြည်နိုင်ငံထူထောင်လို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးတိနန့် ရခိုင်မင်းအဆက်ဆက် ဘီစီ (၆၀၀၀) လောက်ကပင်စလို့ နှစ်ပေါင်းအများကြီး အုပ်ချုပ်လာခဂတ်တေ သမိုင်းအစိုင်အလာကြီးရေ လူမျိုး ၁ ခု ဖြစ်ပါရေ။ စစ်မှန်ရေ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့ အယင် အထက်ထက်ကပင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်လာဂတ်ပြီးကေ ၀ံသာနုရက္ခိတ တရားတိနန့် တိုင်းပြည်မှာ သာယာစည်ပင်ခရေအကြောင်းစော် သမိုင်းမှတ်တမ်းတိ ကျောက်စာတိ ရွှီဒင်္ဂါး ငွေဒင်္ဂါးတိ သမိုင်းရုပ်ကြွင်းတိရေ ထထင်သျှသျှား ဟိ့နိန်ပါရေ။ ယင်းချင့်မှာ ကျွှန်တော်ရို့လွတ်လပ်တေ ရခိုင်နိုင်ငံတော်ရေ သက္ကရာဇ် (၁၇၈၄) ခု ရခိုင်ဘုရင် မဟာသမ္မတရာဇာမင်းလက်ထက်မှာ ဗမာဘုရင် ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းက စစ်မကြေငြာပဲ မတရားသိမ်းပိုက်လိုက်လို့ ရခိုင်နိုင်ငံရေ ဆုံးရှုံးခရပြီးကေ ရခိုင် တမျိုးသားလုံး ကျွှန်ပြုအုပ်ချုပ်ခံခရပါရေ။
သိန်းပေါင်းအများကြီးဟိ့ရေ ရခိုင်ပြည်သူတိသတ်ဖြတ်ခံခရပါရေ။ အရှေ့နေ၀န်းသခင် ဗမာဘုရင်အား သစွာခံပါ၏ လို့ ပီရွက်ကို လိုင်ဖင်းမှာဆွဲထားရေလူတိမှရာ အသက်ဘေးကလွတ်ခဂတ်ပါရေ။ သူ့ကျွှန်မခံချင်ရေ ရခိုင်သားတိကတော့ ရရေလက်နက်တိကို ကိုင်ပြီးကေ တော်လှန်ခဂတ်ပါရေ။ သိန်ပေါင်းအများကြီးဟိ့ရေ ရခိုင်သူ ရခိုင်သားတိ ကိုယ့်နိုင်ငံကို စွန့်ခွါပြီးကေ ရှောင်နိန်ခဂတ်ရပါရေ။ ရခိုင်သူ ရခိုင်သားတိအတွက် အထွတ်တမြတ်ဖြစ်တေ မဟာမုနိဘုရားနန့် မဟာကျန်ဘုရား၊ သမိုင်းအမွီအနှစ် ရတနာပစ္စည်းတိ ရခိုင်ဘုရင်နန့် မိဖုရားအခြွေအရံတိကို ဗမာပြည်တို့ ယူလားခဂတ်ပါရေ။ ရခိုင်ထီးနန်းကို မီးတိုက်ပြီးကေ မြီဖို့ထားခဂတ်ပါရေ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိကိုလေ့ ရာနန့်ချီလို့ ဖျက်ဆီးခဂတ်ပြီးကေ သိက္ခာသမတာဓိဟိ့ရေ ဘုန်းကြီးတိကို အဓမ္မလူဝတ်လဲခိုင်း အကျင့်ပျက်တေ ဗမာ ရဟန်းတိကို ကျောင်းထိုင်ခိုင်ပြီးကေ သာသနာညိုးနွမ်းအောင် လုပ်ခဂတ်ပါရေ။ ဗမာလက်အောက်ကျရောက်ခရရေ ရခိုင်နိုင်ငံတော်ရေ ကိုယ်ရို့ ရိုးရာဘာသာ သာသနာ စာပီ ယဉ်ကျေးမှုတိအားလုံး ဗမာမှုပြုခံရတောင်မကသိ ရခိုင်သမ အပျိုတိကို မုဒိန်းကျင့် အတင်းအဓမ္မသိမ်ပြီးကေ လူမျိုးရေးသွီးနှောဗျာလ် ရခိုင်လူမျိုးပျောက်ကွယ်အောင် ဗမာနယ်ချဲ့တိလုပ်သမျှကို ခံခရဂတ်ပါရေ။ ရခိုင်ပြည်ရေ ဗမာလက်အောက်မှာ (၄၂) နှစ် ကျခရပြီးကေ ခရစ်နှစ် (၁၈၂၆ က ၁၉၄၂) အထိ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တို့ ၁ ကြိမ်၊ (၁၉၄၂ က ၁၉၄၅) အထိ ဂျပန်လက်အောက်တို့ ၁ ကြိမ်၊ (၁၉၄၅ က ၁၉၄၈) အထိ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုနောက်ထပ် ၁ ကြိမ် ကျရောက်ခပါရေ။ မြန်မာ ၁ နိုင်ငံလုံးကို အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့နန့် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တိ သိမ်းထားရေအချိန်မှာ ရခိုင်သူ ရခိုင်သားတိရေ အတိတ်က လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတိကို မိဖျောက်ဗျာလ် ဗမာတိအပါအ၀င် အခြား တိုင်းရင်းသားတိနန့် လက်တွဲပနာ အတူတူ သူ့ကျွှန်ဘ၀က လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဂတ်ပါရေ။ ရခိုင်ပြည်မှာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးထက် သုံးလစောလို့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တိကို တော်လှန်ခပါရေ။ ယေကေခါ (၁၉၄၈) အင်္ဂလိပ်တိဘာ့က တနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်ရေး ရယူပြီးရေနောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်ပြည်ရေ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ့်လူမျိုး အုပ်ချုပ်ခွင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် တန်းတူအခွင့်အရေးတိမရတောင်မကသိ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒီတိက ဗိုလ်ကျစိုးမိုးအုပ်ချုပ်စော်တိကို ခံခရဂတ်ပါရေ။ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း နိန်ပါလတ်ကတ်တေ ရခိုင်ပြည်ရေ (၁၉၄၈ က ၁၉၆၂ ) အထိ ဦးနုလက်မှာ ပြည်နယ်တခုရဖို့အရေးကိုတောင် လက်ဝါးဖြန့် တောင်ခရရေအခြေအနေကိုတောင် ရောက်ခရပါသိရေ။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေပဋ္ဌာန်းရေး တန်းတူအခွင့်အရေးရဟိ့ရေအတွက် တိုင်းရင်းသားတိက တောင်းဆိုလာဂတ်တေအခါမှာ ဗမာဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက စစ်တေပ်အားကိုးနန့် အာဏာသိမ်းလို့ တိုင်းပြည်ကို သနတ်ကျီဆံတိနန့် အနိုင်ကျင့် အုပ်ချုပ်ခပါရေ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒေနိန့်ထိ ဗိုလ်ကျအုပ်ချုပ်နိန်ဂတ်တေ ဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ရေ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကို အသက်သွင်းပြီးကေ ရခိုင်လူမျိုးတိ မျိုးနွယ်စုတိကို ညီညွတ်မှုမရအောင် နည်းမျိုးစုံနန့် သွီးခွဲ၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေ ပြဿနာတိဖြစ်အောင် ဖန်တီး၊ စစ်တပ် တပ်ရင်းတိ အများကြီးချပြီကေ လယ်မြီတိ မတရားသိမ်း၊ ရွာတိကိုမတရား ပြောင်းခိုင်း၊ လုပ်အားပီးတိ မတရားခေါ်၊ ပိုတာခေါ်၊ အကောက်အခွန်တိ မတရားကောက်၊ လူငယ်ချေတိကို စစ်တပ်တို့ အတင်းဝင်ခိုင်း၊ ရခိုင်လူမျိုးပျောက်ကွယ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်နန့် ရခိုင်သမတိကို မုဒိန်းကျင့်၊ ရခိုင်သမတိကို အတင်းအဓမ္မယူ၊ ကိုယ်ဝန်တိနန့် ထားပစ်ခ၊ ဗမာမိသားစုတိကို ရခိုင်ပြည်မှာ ပြောင်းပြီးကေ နိန်ရာချပီးဗျာလ် ရွာတည်လို့နိန်ခိုင်စီစော်တိကို လုပ်ခဂတ်ပါရေ။ ယင်းချင့်တောင် မကသိ ရခိုင်ပြည်က ထွက်တေ သယံဇာတတိ စီးပွါးရေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတိကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ဗျာလ် သွီးစုပ်အမြတ်ထုတ်ကတ်ပါသိရေ။ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းအများကြီး တန်ဖိုးဟိ့ရေ ရခိုင်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကိုလေ့ တရုတ်ပြည်တို့ရောင်းစားဗျာလ် စီးပွါးရှာလို့ ဟိ့ဂတ်ပါရေ။ ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတိမှာ ဆင်းရဲနိန်ဂတ်ရပါရေ။ ပညာရေးမှာလေ့ စာသင်ကျောင်း အလုံအလောက်မဟိ့စော်ရို့၊ တက္ကသိုလ်နန့် အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားရေးမှာ ရခိုင်တပြည်လုံးမှာမှ တက္ကသိုလ် ၁ ခု ရာ ထားဟိ့စော်၊ သင်ရိုးစာအုပ်တိကို ဗမာစကားနန့် သင်ကြားစီစော်တိ တက္ကသိုလ်နန့် အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားစော်မှာ ဗမာလူမျိုးတိထက် ရခိုင်တိအတွက် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးစော်တိ ဆီးရုံ ဆီးပီးခန်းတိအလုံအလောက်မဟိ့စော်တိ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးနန့် အဖက်ဖက်က ခိုက်နောက်ကျကျန်ခစော်တိ ရခိုင်မိ ရခိုင်ဖတိက မွီးရေ ရခိုင်လူငယ်တိကို မှတ်ပုံတင်မှာ ဗမာလူမျိုးအဖြစ်ထည့်လာစော်တိ ရခိုင်အနုပညာ စာပီတိကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖေါ်ထုတ်ခွင့်မရစော်တိ ရခိုင်လူငယ်တိ အများကြီး ပညာရေးပြီးဆုံးအောင် သင်ဖို့မရစော်တိ မမာ့တိနိန့် အချေတိပါမကျန် ကိုယ့်မွီးရပ်မြီကနိန်လို့ နိုင်ငံခြားကို ထွက်လာနိန်ရစော်တိကို ကြည့်ပြီးကေ ရခိုင်အနာဂတ်အတွက် ရင်လီးစရာဖြစ်နိန်ပါရေ။ ယင်းအတွက်တာနန့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နိန့်မှာ ကျရောက်ဖို့ (၂၂၇) နှစ်မြောက် ရခိုင်နိုင်ငံ ကျဆုံးရေနိန့်မှာ ကျွှန်တော်ရို့ ရခိုင်သူ ရခိုင်းသားတိအနိန်နန့် ရခိုင်ပြည်ကို ရခိုင်သား အုပ်ချုပ်ရေး ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရဟိ့ရေး ဒီမိုကရေစီနန့် လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ရဟိ့ရေးအတွက် သမိုင်းပီးအမျိုးသားရေးတာဝန်ကို အတူတူ ထမ်းဆောင်လားဂတ်ဖို့အတွက် ရခိုင်သူရခိုင်သားတိကို Love Arakan အဖွဲ့ဝင်တိကိုယ်စား ကျွှန်တော်က တိုက်တွန်းလိုက်ရပါရေ။
Love Arakan ခိုင်ကျော်ထူး
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 8:49 PM Links to this post
ရခိုင်တေးရီးဆရာ ဦးထွန်းအောင်သာ သီဆုံး
ရခိုင်လူမျိုးနန့် ရခိုင်ဂုဏ်ကို ဖော်ဆောင်ရေ တေးရီးဆရာ ဦးထွန်းအောင်သာ ရေ အေနိ ၂၃.၁၂.၂၀၁၁ ရက် သောက်ကြာနိမှာ စစ်တွေမြို့ရှိ စစ်တွေဆီးရုံကြီးမှာ လူကြီးရောဂါနန့် ကွယ်လွန်လားပါရေလို့ သတင်းရဟိပါရေ။ သူရေ ရခိုင်ရိုးရာ၊ ရခိုင်ယိုင်ကျေးမှု၊ ရခိုင်နန့် ပတ်သတ်တေ ရိုးရာချေတိကို အဓိက ဖော်ထုတ်တေတေးခြင်းတိကို အဓိက ရီးစပ်ပီခရေ တေးရီဆရာလည်း ဖြိုက်ပါရေ။ သူမွီးဖွားပီးခရေထဲသာ ရခိုင်အဆိုတော် မောင်ကိုကို၊ ထွန်းထွန်းရို့၏ ဖခင်လည်း ဖြိုက်ပါရေ။ အေပိုင် ရခိုင်တေးရီးဆရာ တယောက် ဆုံးပါလားရေအတွက် ရခိုင်ဂီတလောကအတွက် လက်မောင်တဖက်ပြုတ်လားရေပိုင်ခံစားရပါရေလို့ ရခိုင်ဂီတ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက တယောက်က ပြောပြပါရေ။ အသုဘကိစ္စကိုတော့ သူနန့် မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းက တိုင်ပင်နီကတ်တေလို့ သိရပါရေ။
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 8:42 PM Links to this post
မိုးခါးရီခွက် ၊ သောက်ဖို့လက်ရုပ်
လှံချက်စူးနစ် ၊ ရင်ဖွင့်လှစ်ဝံ့
သစ္စာတရား ၊ ဆုပ်ကိုင်ထားခ
မန်အားလေးဟိ ၊ ရင်းစွဲတော်လှန်
သံန္ဒိဋ္ဌန်ကြောင်း ၊ ဧကန်မုချ
လွပ်မြောက်ရဖို့ထင်ခသည် ။
ယှည်တိုက်ရဲ၍ ၊ အောင်ပွဲရသော်
ငါကပျော်၏ ၊ သီသော်မှလည်း
ကောင်းချီးထောပနာ ၊ ပြုခါကြိမ်ဖန်
တမလွန်ထိ ၊ ဆုပန်မိခ
တုံဏိဘာဝီ ၊ ငြိမ်မနီဖူး
ပြည်သူမြူးချိန် မြူးချင်သည် ။
ငါ့ကိုတွိလျင် ၊ ဦးတွင်ညွတ်၍
လေးမြတ်ရိုသီ ၊ မပြုလီနှင့်
ညီစီရဲဘော် ၊ တွဲလက်ပျော်ရို့ 
မှန်းမျှော်ခရီး ၊ ရှေ့ဆက်ဗြီးလား
မနီးသည့်တိုင် ၊ ပြိုပျက်ယိုင်ဗျန်
ဒေနိုင်ငံမှာ ၊ မဖြိုက်သာတောင်း
သူရဲကောင်းများ ၊ စိတ်အားမှန်သည်
တရားစစ်မှာ ။ တရာအောင်ပွဲ ဟိဖို့ ဒေ ။
ယင်းပိုင်ဆိုလီ ၊ ငါသီကေယင်
အုဋ္ဌ်ဂူပြင်ထက် ၊ လူမြင်ဖက်နား
ထုပါတ်ကျောက်စာ ၊ ထုဆစ်ကာဖြင့်
ကမ္ဘာမကြီ ၊ ဥဒန်းချွှီဗြီး ၊ ဇါနည်ဖွါးရို့ 
မှတ်သားရစ်အောင် ၊ နိမိန်ဆောင်ရန်
တဘာင်ကဗ္မည်း ထိုးပီးခပါလီကတ်ဖိ ။
ရခိုင်ပြည်လွပ်မြောက်ရီးပါတီမှ ဂုဏ်ထူးဆောင် တော်လှန်ရီး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ခိုင်နီလင်း ၏ဆန္ဒအတိုင်း ခံစားပနာ ဂုဏ်ပြုမော်ကွန်းကဗျာ ပီးပို့လိုက်ပါယင့် ။ ခိုင်နီလင်း ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစီ ၊
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 7:27 PM Links to this post
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီမှ ရခိုင့်အောင်စည် FM Radio အသံလွင့်အစီအစိုင်များကို စတင်အသံလွင့်နီဗျာလ်
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP)က ရခိုင့်အောင်စည်အမည်ရှိ FM Radio အသံလွင့် အစီအစဉ်တိကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ (၁၉) ရက်နိက စတင်အသံလွင့်နီယာဖြစ်ကြောင်း သတင်းရဟိပါရေ။ ယင်း ရခိုင့်အောင်စည် FM Radio အစီအစိုင်တိကို တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ နိတိမှာ မြန်မာစံတော်ချိန် ၅ ချက်တီကနီ ၅ ချက်တီ ၄၅ မိနစ်အထိ တပတ်ကို (၃) ရက် ပုံမှန် အသံလွင့်ပြီးကေ ယင်းအစီအစိုင်တိကို FM 93 မီဂါဟတ်စ်က ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ရေလို့ သိရပါရေ။ ယင်း ရခိုင့်အောင်စည် FM Radio အစီအစိုင်တိနန့်ပတ်သတ်ပြီး တာဝန် ခံ ခိုင်ထွန်းအောင်က ရည်ရွယ်ချက်တိနန့် ပတ်သတ်ပြီး အဂုပိုင်ရှင်းပြပါရေ။ "ကျနော်ရို့ ရခိုင့်အောင်စည် FM Radio အစီအစိုင်တိလွင့်ရရေ ရည်ရွယ်ချက်က နံပါတ်(၁)က ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီနန့် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အဓိက မဟာဗျူဟာ ရည်ရွယ်ချက်နန့် ဇာတိလုပ်နီရေဆိုရေအကြောင်းကို ပြည်သူတိ သိစီလိုပါေ၇။
နံပါတ် (၂) က ရခိုင်ပြည်သူတိ အောက်သားကျွန်ဘ၀ ကျရောက်နီရေဆိုရေအတွက် ဒုက္ခဆင်းရဲတွင်းမှာနစ်နီရရေဆိုရေအကြောင်းကို ရခိုင်ပြည်သူတိ ကွက်ကွက် ကင်းကင်း မြင်စီလိုပါေ၇။
နံပါတ် (၃) က ရခိုင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်လိုသည့် မျိုးချစ် လူငယ်များကို ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီနှင့်တပ်မတော်က အမြဲတမ်းကြိုဆိုနီရေ ဆိုရေ အကြောင်းကို သိစီလိုပါေ၇။
နောက်ဆုံး နံပါတ် (၄) အချက်ကတော့ ရခိုင်ပြည်သူများကို နိုင်ငံရေး၊စီးပွါးရေး၊လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စရေ အထွေထွေဗဟုသုတတိ တိုးပွါးစီချင်စွာတိက အဓိကဖြစ်ပါ ရေ ‘ လို့တာဝန်ခံခိုင်ထွန်းအောင်က ပြောပါရေ။
“ FM Radio အသံလိုင်းစွာ SW လိုင်းနန့် မတူပါ။ အသံလိုင်းစွာ ကီလိုမီတာအလိုက် လားရေအတွက် ကျနော်ရို့လွင့်နီရေ ရခိုင့်အောင်စည် အသံလွင့်အစီအစိုင်တိကို ရခိုင်ပြည်ဇာမြို့ နယ်တိက နားထောင်လို့ ရရေဆိုစွာကိုတော့ ကျနော်ရို့ စုံစမ်းတုန်းပါ” လို့တာဝန်ခံက ဆက်ပြောလားပါရေ။ အဂုလက်ဟိ ရခိုင့်အောင်စည်အသံလွင့်ဌာနက လွင့်နီရေ အစီအစိုင်တိမှာ ရခိုင်သခြင်း များ၊ ဆောင်းပါး၊ ကြော်ငြာ၊ ကဗျာ များဖြစ်ပြီးကေ နောက်ထပ် အစီအစိုင်တိ အများကြီးတိုး လားမည်လို့ လည်း သိဟိရပါရေ။
Posted by သာဂီထွန်း(လေးဝတီ) at 9:15 AM Links to this post
တေးခြင်းနှင့် ဟောပြောချက်များ (1)
ရခိုင်အာဇာနီ -ဦးမောင်သိန်း ရောက်ဖူးခရေ မြောက်ဦးမြီ -ဦးမောင်သိန်း ရခိုင်နိုင်ငံတော်သခြင်း -ခိုင်ဇော် ဒုက္ခငှက်ချေ -ဝင်းကိုခိုင် ကိုကို ...
အမောင်ရခိုင်သား ဇာမှားနီလေ ----------------------------- ရခိုင်စင်စစ်က ယခီးဖြစ်ရ ဟိရေ စာကိုမရွီးလို့ --။၊ သခင်စင်စစ်က ကျွန်ဖြစ်ရ အချ...
ရခိုင်တပ်မတော် -AA- က တော်လှန်ရီးရဲဘော်တိ နယ်သာလန်ကို အခြီချနီထိုင်ခွင့်
တနားချေ လလောက်ပိုင်းက ကာလကတ္တားထောင်က လွပ်လာရေ ရခိုင်ရဲဘော် တိနင့် ကရင်ရဲဘော်တိမှာ အခုဆိုကေ -UNHCR- က- တတိယနိုင်ငံကို အခြီချ နီထိုင်ဖို ...
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ မျိုးမညွတ်လို. ရခိုင်နိုင်ငံတော် ပျက်သုန်းရရေ နိန်.။ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ လူမျိုးခြားကို အားကိုးစိတ် ၀င်လို. တိုင်းပြည် ငါးပါးမှောက်ရေနိန...
The Sun of Asia ဆရာတော်ဥူးဥတ္တမ
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ(ငယ်နာမည်.ပေါ်ထွန်အောင်)ကို ၁၈၇၉၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၊ ရူပရပ် အဖဦးမြ၊ အမိ ဒေါ်အောင်ကျော်သူ ရို့မ...
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ဂုဏ်ပြုကဗျာ
အို--- အရှင် ရာဇ၀င်သမိုင်း ခိုင်းနှိုင်း မော်ကွန်း နေ ၀န်း အာရှ ရေးထိုး ကြ ချိန် လောက လက်ခမောင်းခတ်ပြီလေ။ ထလော့ ပြည်သူ ရှင် လူ ရဟန်း ...
မောင်ကြီးသျှင်ရို့လွမ်းရေ ရခိုင်ပြည်
မွိလားခစွာပါ ဗျန်မနားယေ ။ စိုင်းစားလိုက်စွာနင့် ရင်ထဲမှာ မလွယ်ဗျန်ကားချင့် ၊ တခါတခါ စိုင်းစားမိပါ ယင့်၊ ယေခါအိပ်မရစွာတိကလေး ဖြိုက်လားစွ...
ရခိုင်သမက်တက် ------------------ ရခိုင်အပျိုလူပျိုတိအရွယ်ရောက်လျှင် လူငယ်ချင်းချစ်ကြိုက်၍ လက်ထက်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းများဟိရေပိုင် အများအားဖြင်...
နယူးယောက်မြို့ က အမှတ်တရ အလွမ်းချေရို့ 
တခါတလီ ကျွန်တော်နိန်ထိုင်ရေ ရပ်ကွက်လို့ ဆိုရဖို့ လား မြို့ လို့ ဆိုရဖို့ လား မသိ။ နယူးယာက်မြို့ ကြီးကား ( ၅ ) ရပ်ကွက်ကြီးသို့ မဟုတ် မြို့ေ...
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ကော်မီတီ ဥက္ကဌ...
ကျောက်ဖြူမြို့ အစိုးရစီမံကိန်း အလုပ်သမားများ မကျေန...
ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကျဆုံးရေနိ ကုလသမဂ္ဂရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒ...
ဦးနုနီရာကို လက်ဟိရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ရခိုင်သားတယော...
၂၂၇ နှစ်မြောက် ရခိုင်နိုင်ငံ ကျဆုံးရေနိန့် အတွက်ြ...
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီမှ ရခိုင့်အောင်စည် FM R...
အမျိုးနန့် သီလကို စောင့်ထိန်းပါ
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) ဗဟိုကောင်မတီဝင်ေ...
ALP ဂုဏ်ထူးဆောင်ဗဟို ကော်မတီဝင် ခိုင်နေလင်း လီဖြတ်...
ရခိုင်သမချေတစ်ယောက်၏ ဖေ့ဘုတ်မှ ရလဒ်
ရခိုင်ပြည်တပ်မတော် (AA) ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်း တိ...
တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးတိ လုပ်ပိုင်ခွင့်ခုံရုံး...
ရခိုင်ပြည်မှာ လျှပ်စစ်မီးရဟိရေ လှုပ်ရှားမှုတိကို စစ်...
လက်ရှိမြန်မာ့ နိုင်ငံရေးကို ကျွန်နော့်အမြင်သဘောထား...
စာရီးဆရာကြီး အောင်သင်း ပြောပြရေ ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်း...
ဘင်္ဂလာက မြန်မာ မွတ်ဆင် ဒုက္ခသည်တိကို ဇာမှာ ထားဖို့လဲ...
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အေးချမ်း ဟောပြောပွဲတခုကို ဘန်ကောက်...
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများတိက BBC သတင်းဌာနက အင်နာဂျံ...
နော်ဝေး အစိုးရ ရွှေဂစ်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ လားစော်က...
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(ALA)နန့် အစိုးရ အ...
အာဏာပိုင်တိ ကိုယ်တိုင်က ဥပဒေကို လိုက်နာဖို့လိုရေ
ရခိုင်ပြည် ကိုလိုနီစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းရေး ဆွေးနွေးပဲ...
ရခိုင်ဂစ်(စ်) ချက်ချင်း ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီးရဟိရေး ...
မျိုးမင်းလေး Remix လုပ်ထားရေ စရိုက် တေးခြင်းခွေ မ...
လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေကို ပြဌာန်လိုက်ဗျာလ်
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် နောက်နှစ် နှစ်စပိုင်းလော...
CRPP ခေါင်းဆောင်တိကိုလည် ဟီလာရီကလင်တန်က တွိ့ဆုံလား...
ဘီဘီစီ မဟာလုပ်ကြံမှုကြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ ဖိတ်ကြားလ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်...
၀န်ကြီးဟီလာရီ ကလင်ပါးသို့ အိပ်ဖွင့်ပီးစာ
မျိုးရိုး - (၀င်းကိုခိုင်)
Arakan ဆိုရေ အသုံးအနှုန်းကို ရှင်းပြထားရေ စာတစောင်က...
ရခိုင်ပြည်မှာ မီးတိ အဆက်မပြတ် လောင်းကျွမ်းမှုတိကြော...
ရခိုင်သား ရခိုင်စာမရွီးဘဲဗမာစာနန် ရွီးဗျာလ် ခရီဆက်ပါ ကမကြာခင်ရခိုင်စာပီပျောက်ကွယ်လားဖို့ ဖြစ်ပါရေယင်းတွက် နန်ရခိုင်ပိုင်ရွီးနိန်ရေ ဒေစာမျက်နှာဝတ်ဆိုဒ်တိ ကို ရခိုင် စာ စံ တစ်ခုပေါ်လာရေနိန့် မှာ သတ်မှတ်တေ စံ အ တိုင်း ရွီးလားဖို့ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပီးထားလိုက် ပါယင့်။
ရခိုင်ရေဒီယို ကို အောက်မှာရွီးဗျာလ်နားထောင်ပါ
လေးဝတီ - လွတ်လပ်တေ သတင်းဌာနကို ကျနော်ရို့ ဒီဇိုင် အဆင်အပြင်ကို ၂၈/၁၂/၂၀၁၁ ရက် ကပင် ၃၁/ ၁၂/ ။ ၂၀၁၁ ရက်နိထိ ပြုပြင်လားဖို့ ဖြိုက်ပါရေ၊ တခြားကဏ္ဍတိကိုလည်း တိုးချဲ့ မွန်းမံလားဖို့ ဖြိုက်ပါရေလို့ အသိပီးအပ်ပါရေ-
----------------------------------------------------- ရခိုင်ပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာနန့်ပတ်သက်လို့ ဦးဥာဏိဿရာမိန်းခွန်းကို ဆရာကြီး ဦးဦးသာထွန်းကပြန်လို့ချေပချက်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓ ဘာသာ ရခိုင်ပြည်မှာထွန်းကားလာပုံ( အသံဖိုင်) ------------------------------------------------------ ဘောလုံးပွဲ TV --------------------------------- Your browser does not support frames, so you will not be able to view this page. --------------------------------------------------------- ဒေနိန့် ဖေချာပေါက်ဈီး -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- ဆရာတော်ဥူးဥတ္တမနိန့် စစ်တွေ
---------------------------------------------- ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရီးနင့်ပါတ်သက်လို့အရှင် အရိသရိယကို ဆရာတော်ဦးဥတ္တမဆု ပီးထားပါရေ ယေ။ အခုဆိုကေ ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲမှာ ထောင်ကျနီပါဗျန် ။ မိသားစုတိကလေး လားမတွိနိုင်ပါယေ။အဖဖြိုက်သူ ဦးအောင်ပန်းသာမှာလေး ရွှေဝါရောက်တော်လှန်ရီးအရီးအခင်းမှာ ထောင်ကျနီခရဆဲကာလ ဖြိုက်ပါရေ ယေ။